¿Estás buscando sarin'ny t-shirt maimaim-poana entina hampiroboroboana ny fivarotanao an-tserasera? Moa ve ianao manana mpanjifa nangataka anao hamolavola tee-shirt ary tianao ny hampiseho azy amin'ny modely tee-shirt izay hahasarika azy? Dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mitady ny tsara indrindra ianao mba hahazoana azy ireo na ilainao na mety ho tonga aminao ny tetikasa tahaka izao.
Fa aiza ny maodely t-shirt? Mora ve ny mahazo mockup t-shirt maimaim-poana? Tsotra toy ny fanohizana ny famakiana izay nomaninay ho anao satria ho hitanao ny fitambarana misy ohatra maro ahafahanao misintona izay tianao indrindra na azo ampiasaina amin'ny asanao. Hanomboka ve isika?
1 Maimaim-poana ny safidy mockup t-shirt
1.2 T-shirt miforitra
1.3 T-Shirt Fampisehoana Heather
1.4 Mockup t-shirts samy hafa loko
1.5 PNG Hazo
1.6 T-shirt vehivavy mockup
1.7 World Mockup
1.8 T-shirt mockup lehilahy
1.9 T-shirt modely amin'ny lafiny rehetra
1.10 T-shirt mockup izay manova loko sy endrika
1.11 T-shirt amin'ny afara hazo
1.13 Mockup tora-pasika
1.14 T-shirt mockup amin'ny tanany lava
1.15 Modely t-shirt ho an'ny ankizy
1.16 T-shirt modely ho an'ny ankizy kely
1.17 T-shirt mockup amin'ny tanany lava sy fohy
1.18 Modely Polo ho an'ny mockup
Maimaim-poana ny safidy mockup t-shirt
Araka ny fantatray fa imbetsaka misy ohatra dimy na enina no tsy ampy, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanao fanangonam-bokatra betsaka araka izay azo atao izahay mba hanomezana anao safidy samihafa hisafidianana. Ireo rehetra ireo dia azonao atao alaivo maimaim-poana izy ireo koa aza lany andro ary manomboka mijery izay tianao indrindra.
Manomboka, tsy amin'ny ohatra iray, fa amin'ny maro amin'izy ireo hatramin'ny nandehananay tany Freepik, iray amin'ireo Banky sary maimaim-poana izay azonao jerena amin'ny Internet.
Eto ianao dia hahita loharano mockup T-shirt maro azo isafidianana. Tsy mino izany ianao? Jereo tsara ny rohy.
Eto ianao dia manana sary azonao amboarina mivantana avy amin'ny tranokala hisintonana azy. Ao anatin'izany dia hahazo akanjo samihafa ianao, toy ny hoe manomana valizy ianao, ary eo afovoany dia misy lobaka mivalona izay ahafahanao mametraka ny sary.
Mety amin'ny asa fitsangatsanganana. Azonao atao ny misintona azy eto.
T-Shirt Fampisehoana Heather
Safidy iray hafa anananao dia ity lobaka ity ahafahanao manolotra ny endrika miaraka amin'ny lobaka misokatra, miforitra ary miforitra be. Ny rakitra dia ho an'ny Photoshop CC 2015 saingy azo antoka fa miasa amin'ny dikan-teny hafa amin'ny programa.
Mockup t-shirts samy hafa loko
Raha te hahita ahoana ny endriky ny logo na ny famolavolana ny t-shirt amin'ny loko isan-karazany, ity angamba no iray amin'ireo tsara indrindra hanehoana azy, satria hitanao amin'ny loko fototra.
Ampidino izany eto.
Ity dia banky sary maimaim-poana iray hafa, tsy fantatra loatra amin'ny hafa, fa manana vectors mockup T-shirt fototra, saingy tonga lafatra hanehoana ny endrika ataonao ho an'ny mpanjifanao.
manavaka Mety mahasoa ho an'ny fivarotanao an-tserasera izy io satria misy endrika sasany toa nalaina tamin'ny fivarotana akanjo.
Azonao atao ny maka download eto.
T-shirt vehivavy mockup
Ny ankamaroan'ny mockups t-shirt hita amin'ny Internet dia matetika an'ny lehilahy. Saingy tsy midika izany fa tsy misy vehivavy. Manana ohatra mazava isika eto, miaraka amin'ny T-shirt vehivavy tena misy kalitao dimy mba hahafahanao mampiseho ny fomba fijerin'ny famolavolanao azy ireo.
Eny, marina izany, ny tontolon'ny mockups ary, mazava ho azy, hihaona ihany koa ianao Modely t-shirt maimaim-poana hanatontosana ny endrikao.
Zahao hahitanao azy eto.
T-shirt mockup lehilahy
Mila lobaka misy olona manao azy ve ianao? Ankehitriny dia afaka mahita izany ianao, tonga lafatra mba hampisehoana fa mifanaraka tsara amin'ny vatana ny endrikao. Raha ny marina, azonao atao asio lafika na fototra amin'ny famolavolanao.
Hisintona azy? Tsidiho ity rohy.
T-shirt modely amin'ny lafiny rehetra
Raha ny nangatahana anao dia ny mamolavola tee-shirt na eo anoloana na aoriana dia iray amin'ireo mockups t-shirt azonao aseho, hatramin'ny Manome anao fijery anoloana, lafiny ary aoriana amin'ny sary izany.
Raha hisintona azy dia tsidiho eto.
T-shirt mockup izay manova loko sy endrika
Ity angamba no iray amin'ireo tsara indrindra, satria tsy manome anao loko iray fotsiny amin'ny lobaka, fa maromaro amin'izy ireo. Inona koa, azonao atao ny mametraka ny logo amin'ny matt na gloss, izay manampy amin'ny fahazoana hevitra ny amin'ny mety hiseho amin'ny tena zava-misy.
Tsy misy toy ny misintona azy maimaim-poana eto.
T-shirt amin'ny afara hazo
Mandeha amin'ny endrika hafa izahay izay ahafahanao manova ny lokon'ny lobaka ary mampiditra ny logo na ny endrika nataonao ho an'ny mpanjifanao, na hanehoana ny vokatrao. Hahazo rakitra PSD ianao mba hahafahanao miasa amin'ny Photoshop. Ary koa, manana ny fahafahana mametraka ny anoloana sy ny aoriana.
Io no iray amin'ireo mockups izay tsy mora hita, fa raha mijery kely ianao dia afaka mahita azy ireo. Ary amin'ity tranga ity ny lobaka dia tsy tanany, fa suspenders.
Azonao ampiasaina amin'ny fampiasana manokana na ara-barotra (mifamatotra hatrany amin'ny tranonkala izay nahazoanao azy).
Mazava ho azy fa mila Photoshop ianao mba hiasa miaraka aminy. Ampidino maimaim-poana izany eto.
Ho an'ny T-shirt amoron-dranomasina, tsy misy tahaka ity endrika ity izay ahafahanao manova mora foana ny fampiasana. Afaka mampiasa azy 100% ianao ary ho hitanao ny lobaka eo anoloana, avy any aoriana ary aforitra ihany koa.
eto Manana izany ianao. Mazava ho azy fa jereo fa misy PSD hafa ny t-shirts.
T-shirt mockup amin'ny tanany lava
Mihoatra noho ny t-shirt, saika mitovy amin'ny akanjo ba, fa ny marina dia safidy iray hafa izany, satria ny endrika dia tsy natao ho an'ny lobaka fohy, mety ho an'ny akanjo lava.
Amin'ity tranga ity dia hampiseho aminao ny vokatra momba ny vehivavy ianao ary azonao atao ny manampy ny endrikao mora.
Modely t-shirt ho an'ny ankizy
Iza no milaza fa tsy mila mpanjifa na mpampiasa ianao raha hijery t-shirts tora-pasika ho an'ny ankizy? Eto ianao dia manana ohatra mazava momba ny fomba a mockup t-shirt ankizy.
Izany dia ahafahanao mampiseho ny anoloana sy miaraka amin'ny zoom amin'ny endrika napetrakao.
T-shirt modely ho an'ny ankizy kely
Mifandraika amin'ny teo aloha, fa amin'ity tranga ity miaraka amin'ny modely kely, manana endrika t-shirt ity ianao ka izany Ny endrika dia mijery tsara kokoa amin'ny vatana.
T-shirt mockup amin'ny tanany lava sy fohy
Mba manana safidy roa ianao, indrindra raha mila manolotra ny mpanjifanao ilay iray ianao jereo ny endrika amin'ny t-shirt roa samy hafa.
Modely Polo ho an'ny mockup
Raha polo shirt no tadiavinao dia mety ho safidy izany. Eny tokoa, natao ho an'ny tena manokana ihany izy io, Raha te hampiasa azy io amin'ny fampiasana ara-barotra ianao dia tsy maintsy mandoa $ 4.
Tadiavo izany eto.
Ao amin'ny Internet dia afaka mahita t-shirt maimaim-poana maro kokoa ianao, na dia nandoa vola aza. Ka raha tsy nisy naharesy lahatra anao na iray aza amin'ireo napetrakay ireo, dia mamporisika anao izahay mba handany fotoana kely hitadiavana izay mifanaraka amin'izay ilainao amin'ny fivarotanao, mpanjifanao na hampisehoana ny endrikao amin'ny hafa. Afaka manoro modely t-shirt maimaim-poana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » T-shirt mockup
Ahoana ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP